Bopha ibhanti yakho: ukungazinzi kubuyela kwiimarike | Ezezimali
Bopha amabhanti akho: ukungazinzi kubuyela kwiimarike
Uzinzo? Ewe, oku kubonakala ngathi yinto eqhelekileyo kwiimarike zezemali kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ukulahleka kwimisebenzi yabatyali mali ixesha elide. Kuba ngokwenene, yonke into ibonakala ibonisa oko Umngcipheko wezopolitiko kwaye iinkqubo zonyulo eziza kwenzeka kulo nyaka ziya kuthi zibangele ukungalingani okuthile kwiimarike zezemali. Ukuya kwinqanaba elinokuthi litshintshe ikhosi umendo nanini na. Awuyi kuba nanto unokuyenza ngaphandle kokuba ubazi ngayo ukuze babenenzuzo yokonga kulo nyaka.
Kungenxa yokuba, yonke imiqondiso yalatha ezopolitiko ziya kubeka ikhosi yeemarike zezemali kwakhona, ngaphezulu kwezinye izinto eziqwalaselweyo ezinxulunyaniswe neendlela zoqoqosho okanye ezinxulunyaniswe kwizabelo. Ngale ndlela, kuya kuba yimfuneko ukuba lwazi unyulo oluza kubanjwa kwilizwekazi laseYurophu kwiinyanga ezizayo. Uluhlu lolunye lwezona zinto zigqibeleleyo onokuzifumana: IGreat Britain, i-Itali, iJamani kwaye mhlawumbi iSpain iya kuthi ekugqibeleni ijoyine. Inkuthazo yamaxabiso esitokhwe ukubonisa ukuhla okunamandla.
Zonke ezi nkqubo zonyulo kufuneka zikwenze ulumke kancinci apha. Kuya kufuneka ulawule umngcipheko onokuthi usebenze kwimarike zezemali. Kwaye eyona ndlela yokuyiphumeza iya kuza ngokwahluka okubanzi kwemali yakho ekhoyo. Ukuba unako, sukugxila kukhuseleko olunye, kodwa ngebhasikithi yesitokhwe esinokudityaniswa nezinye izinto zexabiso. Iya kuba sesinye sezona ndlela-qhinga zikrelekrele zokujongana nemeko ezingathandekiyo kangako zeemali zamashishini ezingenanzala emisiweyo.
1 Ukwanda komngcipheko wokungazinzi
2 Uqoqosho lwaseSpain luyaphucuka
3 I-euro inokufumana amandla
4 Iimpawu ezibuza ukubonisa ukungazinzi
5 Ufanele wenze njani?
6 Yintoni enokubangela ukungazinzi?
Ukwanda komngcipheko wokungazinzi
Zonke ezi ziganeko zinokuza nomgaqo-nkqubo aziyi kuba lelona qabane lifanelekileyo lokufumana izibonelelo kwimarike yemasheya. Ukuba akunjalo, unokuba lula ngakumbi ekulahlekelweni yimali. Ukuya kumanqanaba okwazi ukuba ngamanye amaxesha awunakucinga, kunye neengxaki ezisengqiqweni kwi-akhawunti yakho yokujonga. Ngapha koko, awungekhe ulibale njalo amathuba amatsha eshishini aya kuvela ngenxa yoko ukungazinzi kwiimarike zezabelo.
Kungenxa yokuba kuya kufuneka uyazi ukuba awungekhe wenze imali kuphela ngokunyuka kwesitokhwe. Kodwa kwakhona ezantsi ngobunzulu bezinto ezinje ngemali yotyalo-mali okanye ukuthengisa kwikhredithi. Nangona ngexabiso le- thatha umngcipheko omkhulu ekusebenzeni. Kuba umvuzo unokuphakama kunoko kunikelwa ziimveliso eziqhelekileyo. Iya kuba ngumzuzu ofanelekileyo kulo nyaka ukuba ubekeke ngakumbi ekutshintsheni iqhinga lakho lotyalo-mali. Kwanokuya kwindawo eyahlukileyo ngokweendawo zentengiso yesitokhwe yamanye amazwe.
Uqoqosho lwaseSpain luyaphucuka
Inkalo elungileyo iya kubonelelwa ngamathemba okukhula kuqoqosho lwaseYurophu. Ayothusi into yokuba ingenakungaziwa ukuba i-International Monetary Fund (IMF) yonyusa uqikelelo lokukhula kweYurophu kunye namazwe asakhulayo. Kwakhona eSpain, apho babona kwangaphambili ukuba i-GDP yalo nyaka inokukhula iye kumanqanaba asondele kakhulu kwi-3%. Into enokuthi ngokuqinisekileyo ikhuthaze abathengi ukuba bangene kwiimarike. Ngethemba elikhulu ekusebenzeni kwayo kwimarike yemasheya.
Kodwa, ingaba oku kulindeleka kokukhula kuya kupheliswa kukungazinzi okubangelwe ziinkqubo zonyulo? Lixesha kuphela elinokukwazi ukufumana impendulo ngqo, likushiye kungabikho ndlela yokwenza isicwangciso esifanelekileyo sokutyala imali. Njengoko kwenzekile kwimithambo yangaphambili. Umrhumo kuya kufuneka uhlawule ngokukhetha unyaka onzima njengoko ubonakala namhlanje. Phi yonke into ingenzeka, ukusuka kunyuso olubonakalayo ekupheleni konyaka ukugqibezela utshintsho kwindlela yokuvala kunye nokuvala unyaka ngokubi.
I-euro inokufumana amandla
Kukho imeko ekubonwa ngayo ngabahlalutyi abambalwa kwaye ngenxa yoko kufuneka ihlalutywe ukusukela ngoku ukuya phambili. Ayikho enye into enokwenzeka ngaphandle koko i-euro izuza amandla kwinxalenye yesibini yonyaka. Isizathu kungenxa yento elula njengabatyali mali behlabathi ababuyela kwiimarike zesitokhwe zamazwe akummandla we-euro. Njengomphumo wale meko intsha, ukuqhubeka kwenkqubo yangoku ephezulu kunokuba ngaphezulu kwendlela yethiyori. Kuza kunceda ii-indices ukuba zilandele kukunyuka kwabo kwixabiso lezabelo. Ubuncinci iinyanga ezimbalwa ubuncinci.
Enye into enokuxhamla ngokulingana ngeli xesha kukuba Ukubuyisa inzuzo igcinwe okanye ihambele phambili kwikota ezayo Iya kuba yenye yeendaba ezilungileyo onokuzifumana ukwenza intshukumo yakho ibe yinzuzo kwiimarike zezemali ngempumelelo enkulu. Ngaphezulu kwezinye iimeko ezinomdla ngokulinganayo ukukhusela umdla wakho njengomtyalomali omncinci nophakathi. Yenye yeeparameter ekufuneka uyithathele ingqalelo ukuvula imisebenzi yakho.
Iimpawu ezibuza ukubonisa ukungazinzi
Kuyakubaluleke kakhulu ukuba ubone iimpawu ezinokulindela ukungazinzi kweemarike zezemali. Ezinye zazo ziya kuba lula ukuziqonda, ngelixa ezinye ziya kufuna uhlalutyo oluntsonkothileyo. Kuzo naziphi na iimeko, baya kunika isikhokelo sokuziphatha apho zonke izenzo zakho ziya kufaneleka malunga nobudlelwane nelizwe elihlala linzima lemali. Kwaye apho baya kuthi ngokusisiseko babe zezi zilandelayo sikubhengeza apha ngezantsi.
Nasiphi na isiphumo sokhetho kunyulo lwaseYurophu ayizizo incasa yeemarike zezemali. Kuya kubakho unyulo oluninzi kangangokuba nayiphi na inokubangela utshintsho olukhawulezileyo kwiimarike zamasheya.
Inokwenzeka utshintsho kumgaqo wemali, kwicala elinye nelinye kwiAtlantic. Ngale ndlela, kuyakufuneka silindele ukuba kwenzeka ntoni ngexabiso lenzala e-United States nakumazwe akummandla we-euro.
Ukubonakala okunokubakho kwe- bubble kumatyala oluntu jikelele. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba inokuba sisisulu se-rally ebaluleke kakhulu. Ngokusikwa kwixabiso lezabelo ngaphezu kokubaluleka. Ayilolize, ungathenga ixabiso lezabelo kumanani okhuphiswano ngakumbi kunangoku.
Xa i ukulungiswa kwexabiso ebaluleke ngakumbi kunesiqhelo. Kungenxa yokuba ngale ndlela izakuhamba inyukele phezulu okanye ngokuthe ngcembe iye ezantsi ngokucacileyo. Nokuba undwendwela amanqanaba orhwebo angabonwanga kwiminyaka yakutshanje.
Olunye uphawu olucacileyo olunokubonelelwa yimarike yezemali yi ukumiselwa kwezikhundla ezimfutshane malunga nabathengi. Ngale ndlela, ukuncipha kotshintshiselwano lokhuseleko kuya kuba sesinye sezitshixo sokulindela le meko.
Okokugqibela, awunakulibala ukuba ngamanye amaxesha iingxowa ziya kufuneka phumla emva kokukhwela kokugqibela. Kuba ngokwenyani, kwizabelo akukho nto inyukayo okanye yehla ngonaphakade. Endaweni yokuba iintshukumo zabo zilawulwe ngamanqanaba okanye imijikelo echazwe kakuhle. Kuya kufuneka ulandele imeko yomzuzu ngamnye. Akukho nto iyenye, kuba iya kuba sisicwangciso esiluncedo kakhulu kwimidla yakho.
Ufanele wenze njani?
Owona mzuzu ubalulekileyo kunye noqinisekileyo ufikile ukungenisa ukusebenza kwakho kwimarike yemasheya. Izenzo zendlela ekufuneka zilawulwe ngayo imisebenzi yakho ukusukela ngoku. Abayi kuba nzima kakhulu ukufaka isicelo kwaye ukubuyisela baya kukunika ngaphezulu kovuyo olunye ukusukela ngoku. Ezi zezinye zezona zibalulekileyo onazo esandleni sakho ukuzenza ngempumelelo ngakumbi kunakwamanye amaxesha.
Gcina imali ethile ukuze ulungiselele ukuthatha ithuba leentengo eziya kuthi zivelise kutshintshiselwano kwihlabathi liphela. Unga thenga izitokhwe ngamaxabiso angathethekiyo kude kube ziinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Kuya kufuneka ube neembumbulu eziyimfuneko ukuze wenze le misebenzi inokuba yinzuzo enkulu ukuphucula iiasethi zakho. Ngale ndlela, ukungazinzi kweemarike zezemali akufuneki kuthathwe kwindawo engeyiyo. Kodwa endaweni yokujonga izinto ngokuchaseneyo, oko kukuthi, njengethuba elinikezelwa ziimarike zokuthenga izabelo ngexabiso elingcono kwaye ke ngokwenza ukuba ukonga kube yinzuzo ngokubanakho ukubuyela kwabo.
Yintoni enokubangela ukungazinzi?
Nokuba ucinga ukuba ukungazinzi kwiimalike zentengiso kuya kuba ngabona bahlobo bakho bangcono, unokutshintsha ingqondo ngokuhamba kwexesha. Kungenxa yokuba, eneneni unokusebenzisa eli thuba. Njani? Ewe, ngezi ngcebiso zilandelayo sikubhengeza apha ngezantsi.
Ukulinda iinyanga ezimbalwa kwisigqibo sakho sokuya esidlangalaleni ukuze ufumane i amaxabiso okhuphiswano ngakumbi kude kube ngoku.
Ukusebenzisa Ukuguqula iimveliso apho wenza khona imisebenzi enenzuzo kunye neemarike eziwayo, ngamandla amakhulu ngokweenzuzo eziveliswe kwimibutho.
Ukubheja kwi ixabiso eliwayo uya kuba kwezona meko zintle zokuvelisa ezona zibonelelo zilungileyo. Nangona kufuneka uqiniseke kakhulu ukuba lo mkhuba wenzeka kuba ingumsebenzi obeka umngcipheko ogqithileyo.
Isenokuba sisizathu esifanelekileyo sokuba ubuyele kwifayile ye- iimveliso zebhanki ebomini. Inzala abaya kuyinika ayizukuphakama kakhulu, kodwa ubuncinci iya kuqinisekiswa minyaka le. Ngokubuyisa imali oyigcinileyo eya kuba phakathi kwe-0,50% kunye ne-2,00%. Ngokuqinisekileyo iya kongeza uzinzo kwinkqubo yakho yokonga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Bopha amabhanti akho: ukungazinzi kubuyela kwiimarike
Ungazazi njani iintsuku ezinegalelo kukhuseleko lwentlalo?
Iingxowa ezilindelekileyo zonyulo eJamani